Ndeipi nzira dzakanakisisa dzekutora PR maO backlinks yakakwirira?
Muchiedza chekugadzirisa kweGoogle kwekupedzisira, vakawanda vema webmasters vanowanzodavira kuti backlinks haigoni kuunza simba kune imwe website. Hungu, 2012 gore rakaunza kuwanda kwekushandura mukugadzira nyika. Nzvimbo dzakawanda dzehutachiona dzakange dzakabatanidzwa nemaitiro ekugadzira mazano ekunyengera dzakarasikirwa nenzvimbo dzavo. Zvisinei, Penguin update haina kugadzirwa nechinangwa kuderedza kukosha kwemashure ekutsvaga injini. Icho chinangwa chekutanga chechirongwa ichi chakanga chiri chekuchinja nzira dzekuwana mungozi yejuni. Vaya vakakwanisa kuenderana nemitemo mitsva, vanogadzira hutano hwehutano hwemashoko vachishandisa nzira dzekugadzira mazano ehupenyu - calcio balilla vendita napoli pizza.
Ndicho chikonzero nei pasina mubvunzo kuti chivako chekubatanidza chichiri kuita basa rinokosha mukutsvaga kwekutsvaga injini. Uyezve, ihwo humwe hwezvinhu zvakakosha zvakakosha uye chikamu chakakosha chekambani yekutsvaga. Vashandi vanowanzotenga zvinhu kubva pane marimi anozivikanwa pawebhu. Kusimudza mararamiro ako uye simba pawebhu, iwe unoda kuvaka hukama hwakawanda sezvaungagona. Zvisinei, iwe unofanirwa kuve nechokwadi kuti yese yeEOO backlinks inobva kumaWebsite maP PR sezvo vanhu vanotenda kuti kunyange vane mafungiro. Kunyanya kutaurwa nevekunakidzwa webhutori inowanikwa munharaunda yako ndeimwe yenzira dzakanakisisa dzekuwana kuvimba kwako.
Muchikamu chino, tichakurukura mamwe mazano anobatsira ekugadzira mazano achakubatsira kuti uite zvepamusoro zveP PR SEO kumashure kuburikidza nekusika nekugadzirwa kwezvinhu. Sezvo hupenyu hwangu hunoona hutano hwekuvakira hunoenderana nehutungamiri hwehutano hunoita hunoita kuti huwandu hwekugovana huve hunoita kuti huwandu hwemagariro evanhu huwedzere uye hunosimudza nhamba yezvinodhaka zvakasikwa zvakare.
Nzira dzekuwana zvakakwirira zveS PR reSeO
Bhizinesi rega rega rekutsvaga rinoda kuramba riri pedyo nevatengi vanogona kuva nehukama hwakasimba. Kufunga nezvemakambani ezvokudya zvakakosha zvikuru kune imwe kambani yepaIndaneti iyo inoda kugutsa zvavanoda.
Iyi kambani yekuvakira yakasununguka yakajeka kuti zvikwata zvivepo. Iwe unogona kugadzira hutsva hutsva nekusvika kunze nemashoko ako, feedbacks, uye mazano. Iwe unofanirwa kuwana webhutori nzvimbo dzine zvikamu zvakatsaurirwa kune zvinyorwa uye kubudisa mhinduro yako ikoko.
Zvakare, unogona kubatsirwa nokushandisa dzimwe nzvimbo dzekutsvaga muIndaneti dzakadai seAma Amazon Customer Reviews, Trustpilot, Ipi ?, ConsumerReports, nezvimwewo.Aya mahwendefa ari paIndaneti anoshandiswa kubatanidza makambani anoda kugamuchira mhinduro dzevatengi uye avo vanotarisira kuipa. Kushandisa nzira iyi yekuvakira mazano, unowana mikana yakawanda yekuti zvinyorwa zvako zvichabudiswa mumuteereri wezvikamu chikamu kana kunyange papeji huru.
Unogona kusiya uchapupu huri mumashoko mashomanana kana zvakadzama nyaya yekudzidza. Chero zvaunoda, iwe unofanirwa kuva wakananga, hwechokwadi uye hwechokwadi. Edza kusapindirana neshamwari nokuti kuongorora kwako kungaratidzika sechitengesero. Ita mhedziso pamusoro pemiti yemuiti panzvimbo yekambani inobatsira. Kana nyaya yako yekudzidzira inopa ruzivo rwakakosha uye ruzivo uye inopa zvikomborero zvechokwadi zvechimwe chigadzirwa kana basa, saka zvingangoita kuti mhinduro yako ibudiswe nehukama kunzvimbo yako kuti uone kuti iwe munhu chaiye.
Saka, semugumisiro, uchawana zvakakosha PR PR backlink usingashandisi mari nemabasa.